एमाले ललितपुरबाट को–को परे सिफारिसमा ? « Pahilo News
एमाले ललितपुरबाट को–को परे सिफारिसमा ?
प्रकाशित मिति :9October, 2017 11:40 am
२३ असोज । नेकपा (एमाले) ललितपुरले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । जिल्ला कमिटीको बैठकले संघका लागि निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा केही दिनअघि एमालेमा प्रवेश गरेका पूर्व डिआइजी नवराज सिलवाललाई उम्मेदवार बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
सो क्षेत्रमा मधुसूदन पौडेल, पुरुषोत्तम हुमागाईं र श्याममाया कार्कीको नाम पनि सिफारिस भएको छ । यस्तै क्षेत्र नं २ मा कृष्णलाल महर्जनको नाम सर्वसम्मत भएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा प्रमेश हमाल, रघुजी पन्त र सुशीला नेपालको नाम सिफारिस भएको छ । प्रदेशतर्फ १ नं को क निर्वाचन क्षेत्रमा उमेश शर्मा बजगाईं, पुरुषोत्तम हुमागाईं र कमलकुमारी श्रेष्ठको तथा ख मा चेतनाथ सञ्जेल, रामकृष्ण हुमागाईं र गोमा घिमिरेको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
क्षेत्र नं २ को ‘क’ मा माधव पौडेल र ‘ख’ को लागि अष्टवीर व्यञ्जनकार, श्यामगोपाल महर्जनको नाम सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नं ३ ‘क’ को लागि देवकी श्रेष्ठ, रघुनाथ महर्जन र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा ‘ख’ को लागि कल्पना अधिकारी, जीवन खड्का, दामोदर खड्का, राजेन्द्र थापामगर, स्वयम्भुराज डंगोल, सुकुमाया लामा, हरिकृष्ण थापा सिफारिस गरिएको छ ।